ပြည်သူလူထုနဲ့အတူ တစ်သားတည်းရပ်တည်းခဲ့ပြီး MRTV သတင်းအစီအစဉ်ကနေ အစောဆုံး CDMလုပ်ခဲ့တဲ့ ဦးကျော်သက်လင်းရဲ့လက်ရှိအခြေအနေ – Cele Top Stars
ပြည်သူလူထုနဲ့အတူ တစ်သားတည်းရပ်တည်းခဲ့ပြီး MRTV သတင်းအစီအစဉ်ကနေ အစောဆုံး CDMလုပ်ခဲ့တဲ့ ဦးကျော်သက်လင်းရဲ့လက်ရှိအခြေအနေ
ချစ်လှစွာသောပရိသတ်ကြီးရေ MRTV ကအစောဆုံး CDMလုပ်ခဲ့တဲ့ ဦးစီးအရာရှိ ဦးကျော်သက်လင်း၊ ပုံ(၁) ယခင်တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကပုံ၊ ပုံ(၂) ယနေ့ ဦးကျော်သက်လင်း၊ လွတ်မြောက်နယ်မြေရောက်ရှိနေတဲ့ MRTV မှသတင်းကြေငြာသူကိုကျော်သက်လင်း တောထဲဝင်ယူနီဖောင်းလေး ဝတ်​သနတ်လေးကိုင်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ပြရင်အဆင်ပြေမလား၊ ကျနော်fb accလေးပြန်ရပြီးမိတ်ဆွေတွေကိုလိုက်ကြည့်မိတယ်…။
အများအားဖြင့်တော့အရင်အတိုင်းပါပဲ။ ကျနော်လား.?၊ ကိုဗစ်ငှက်ဖျ.ား တုတ်ေ.ကွးအားလုံး ထိပြီးလွန်မြောက်ခဲ့ပါပြီ။ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ကျန်းမာလျက်ပါ။မီးစိမ်းလေးမလင်းပြန်မလာ ပြန်မဆုံတော့တဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်စိတ်မကောင်းကြီးစွာဖြစ်မိပါတယ်။မြို့ပြမှာစိတ်ရောကိုယ်ပါဒုက္ခရောက်နေကြသူတွေအတွက်လည်းစိတ်ထိခိုက်ရပါတယ်….။
စိတ်ပူနေကြသူတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်စွာ နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်ကြီးလဲ အမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းပြီးဖတ်​ရှု့​ပေးကြတဲ့ မြန်မာပြည်သူ/သားများအားလုံးအာဏာရှင်လက်အောက်က​နေ အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေလို့ဆုတောင်း​ပေးလိုက်ရပါတယ်…။
ခဈြလှစှာသောပရိသတျကွီးရေ MRTV ကအစောဆုံး CDMလုပျခဲ့တဲ့ ဦးစီးအရာရှိ ဦးကြျောသကျလငျး၊ ပုံ(၁) ယခငျတာဝနျထမျးဆောငျစဉျကပုံ၊ ပုံ(၂) ယနေ့ ဦးကြျောသကျလငျး၊ လှတျမွောကျနယျမွရေောကျရှိနတေဲ့ MRTV မှသတငျးကွငွောသူကိုကြျောသကျလငျး တောထဲဝငျယူနီဖောငျးလေး ဝတျ​သနတျလေးကိုငျပွီးဓာတျပုံရိုကျပွရငျအဆငျပွမေလား၊ ကနြျောfb accလေးပွနျရပွီးမိတျဆှတှေကေိုလိုကျကွညျ့မိတယျ…။
အမြားအားဖွငျ့တော့အရငျအတိုငျးပါပဲ။ ကနြျောလား.?၊ ကိုဗဈငှကျဖြ.ား တုတျေ.ကှးအားလုံး ထိပွီးလှနျမွောကျခဲ့ပါပွီ။ကိုယျရောစိတျပါ ကနျြးမာလကျြပါ။မီးစိမျးလေးမလငျးပွနျမလာ ပွနျမဆုံတော့တဲ့မိတျဆှတှေအေတှကျစိတျမကောငျးကွီးစှာဖွဈမိပါတယျ။မွို့ပွမှာစိတျရောကိုယျပါဒုက်ခရောကျနကွေသူတှအေတှကျလညျးစိတျထိခိုကျရပါတယျ….။
စိတျပူနကွေသူတှအေားလုံးကိုလညျးကြေးဇူးတငျစှာ နှုတျခှနျးဆကျပါတယျ။ မွနျမာပွညျကွီးလဲ အမွနျဆုံးငွိမျးခမျြးပွီးဖတျ​ရှု့​ပေးကွတဲ့ မွနျမာပွညျသူ/သားမြားအားလုံးအာဏာရှငျလကျအောကျက​နေ အမွနျဆုံးလှတျမွောကျကွပါစလေို့ဆုတောငျး​ပေးလိုကျရပါတယျ…။
ဒီနေ့မှာရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားတဲ့ မြန်မာသံတေးသံရှင် မိုးသက်နိုင်အတွက် ဝမ်းနည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ သရုပ်ဆောင်နေထူးနိုင်